1.Ukuthintela uthuli ngokufanelekileyo
Ukugcotshwa kothuli lokugcina imaski kusekwe ekuthintelweni kokusebenza kothuli olusulungekileyo, ngakumbi uthuli olucekeceke ngaphantsi kwe-2,5 microns. Ngenxa yokuba obu bunjani besuthuli bunokubakho ngqo kwi-alveoli, impilo yoluntu ibangele ifuthe elikhulu. Izinto zokuphefumla zithuli, ezenziwe zenziwa zasebenza njengekhampasi yecarbon fiber okanye ilaphu elingenziwanga, zigqithisa amasuntswana othuli anokuncipha kunee-microns eziyi-2,5.
2. Ukudamba okuqinileyo
Uyilo lwe-Mask kwicala lokuvuza kukukhusela umoya ngokusebenzisa imaski kunye nobuso bomntu ngaphandle kokungqubeka kwiimfuno zobuchwephesha bokucoca. Umoya, njengamanzi, uqukuqela apho kukho khona ukumelana kancinci. Xa imbobo yemaski ingasondelani nobuso, izinto eziyingozi emoyeni ziya kuvuza kwindawo yokuphefumla yomntu. Ke, nokuba ukhetha imaski efanelekileyo yokucoca. Ayikukhuseli impilo yakho. Imigaqo emininzi kunye nemigangatho yangaphandle ibonelela ukuba abasebenzi kufuneka bahlole rhoqo ukuqina kwee-masks. Injongo yoku kukuqinisekisa ukuba abasebenzi bakhetha iimaski ezifanelekileyo kwaye bazinxibe ngokweenkqubo ezichanekileyo.
3. Nxiba kakuhle
Ngale ndlela, abasebenzi baya konwaba kukunyanzela ukubanxiba emsebenzini kunye nokuphucula ukusebenza kwabo kakuhle. Ngoku iimaski zolondolozo lwangaphandle, akufuneki zicoceke okanye zitshintshe indawo, xa uthuli lugqithisiwe okanye iimaski ezilahliweyo, ukwenzela ukuba kuqinisekiswe ucoceko lweemaski kunye nabasebenzi basimahla kulondolozo lweemaski zamandla kunye namandla. Kwaye uninzi lweemaski zamkele ubume be-arch, bunokuqinisekisa ukusondela kunye nobume bobuso kwaye bunokugcina indawo ethile kwindawo eyi-muzzle, ndinxibe kamnandi.